Madax Ka Socota Safaaradda Soomaaliya Ee Turkiga & Rugta Ganacsiga Turkiga Oo Ganacsiga Ka Wada Hadlay
Waxaa xarunta dhexe ee Rugta Ganacsiga Ee Istanbul kulan ku qaatay Xoghayaha Guud ee Ruugta Ganacsiga Turkiga Cumar Bal iyo madaxa xafiiska ganacsiga u qaabilsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga.
Kulankaas ayaa looga wada hadlay sidii lagu lagu hormarin lahaa xiriirka ganacsi ee labada dal iyo sidii lagu xoojin lahaa wada shaqeynta ka dhaxeysa Rugta Ganacsiga Turkiga iyo Soomaaliya.
Yuusuf Axmed Xasan oo ah madaxa xafiiska ganacsiga u qaabilsan Safaaradda Soomaaliya ee Turkiga ayaa la wadaagay fursadaha ganacsi ee Soomaaliya ka jira dhiggiisa Turkiga iyo sida ugu habboon ee fursadahaas looga faaideysan karo.
Mr. Yuusuf ayaa sidoo kale ka warbixiyay fursadaha maalgashi ee dalka ka jira waxa uuna ku nuuxnuuxsaday in waqti xaadirkan ay tahay waqtigii ugu haboonaa ee Soomaaliya la maalgeshan lahaa.
Xiriirka dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ayaa sanadahii ugu dambeeyay wanaagsanaa kadib markii Turkiga uu soo gurmaday Soomaaliya sanadkii 2011 oo abaaro badan ay ka jireen dalka. Tan iyo wixii ka dambeeyay xiligaas waxaa sii xoogeysanayay xiriirka labada dal.
Cumar Bal oo isagana ah Xoghayaha guud ee Rugta Ganacsiga Turkiga ayaa bogaadiyay warbixinadii iyo hadaladii Yuusuf Axmed uu la wadaagay Rugta Ganacsiga Turkiga. Waxa uuna ballan qaaday in Rugta Ganacsiga Tukiya ay si dhaw ugula shaqeyn doonto doonto Soomaaliya dhanka ganacsiga.